Iindidi zeengxaki: AMAGAMA, IIMPAWU, KUNYE NOKUNYE
Namhlanje siza kuchaza yonke into enxulumene nayo iintlobo zoonxantathu. La manani asele iminyaka emisele imisebenzi emininzi kunye nezinto ezenziweyo eluntwini, ibe zizinto ezifundwayo kwaye namhlanje zisetyenziselwa ukunika ixabiso kunye namandla kuyilo, kulwakhiwo nangaphezulu kwako konke, zibonelela ngemiba yolwazi.
1 Iindidi zonxantathu
1.1 Ngokwamacala ayo
1.2 Ngokweeengile zabo
2 Izinto zonxantathu
Xa simisela la manani ejiyometri kufuneka siqwalasele iintlobo zoonxantathu kunye neempawu zazo kunye nokusetyenziswa kwayo. Ngale ndlela, ziimpawu zejiyometri ezenziwe ngamacala amathathu kunye neeengile ezintathu, nokuba zivaliwe okanye zivulekile, kuxhomekeke kuhlobo lwevertex. Oonxantathu ubukhulu becala bamelwe ngoonobumba abancinci, bahlula isikwere, itrapezoid, irhombus okanye uxande.
La manani ejiyometri eneneni ayipoligoni ezinamacala amathathu. Lelona nani lincinci elikhoyo phakathi kwezinto ezahlukeneyo ezibonakala kwiarithmetic kunye nokuzoba; ecaleni kwesikwere, i-pentagon, i-hexagon, i-heptagon, i-octagon, i-hendecagon kunye ne-decagon; Nangona zininzi ezinye, ithathwa njengeyona ibalulekileyo.
Los iintlobo zoonxantathu namagama abo Banokuhlelwa ngokwamacala abo okanye ngokwee-engile zabo, kwaye kumiselwe zii-engile ezivulekileyo okanye ezivaliweyo, bahlala benezinto ezibanceda bachaze iinxalenye ezithile zamanani abo, kodwa siyazibona iintlobo,
Kolu luhlu siza kunika iinkcukacha koonxantathu ngokwamacala ayenzileyo, abanye bade, abanye bayalingana kodwa bahlala bezimisele ngobude kunye nokuhambelana kwemigca.
I-Equilateral, inamacala onke alinganayo, oko kukuthi, umgca ngamnye unobude obulinganayo.
Isosceles, unxantathu uthathelwa ingqalelo apho amacala ayo amabini alinganayo ngokulinganayo kwaye aseleyo anobude obahlukileyo.
I-Scalene, ngunxantathu apho onke amacala ayo enobude obahlukeneyo.
Zizo zonxantathu ezimiselwe ngokwexabiso lee-engile zazo nganye. Oku kugqiba i-vertex ephezulu okanye ephantsi, kuxhomekeke kwinani leedigri eziqulethwe kwimanyano yemigca.
Uxande, ngunxantathu apho elinye lamacala alo line-engile elungileyo, oko kukuthi, yenza i-vertex engama-90.
I-engile e-acute, inonxantathu apho ii-vertices zayo zinee-angles ezibukhali, oko kukuthi, ngaphantsi kwe-90 degrees, (kule meko kanxantathu olungileyo ikwayixande kuba ii-engile zalo zinee-degrees ezingaphantsi kwe-90.
I-Scalene, ithathwa njengonxantathu apho ii-angles zayo ezimbini zenza i-angle ye-obtuse, ukuze zikhulu kune-90 degrees.
Enye indlela yokujonga unxantathu njengophawu lwejiyometri kumiselwe sisiphumo seeengile zayo. Ukuba isikwere kufuneka sibe nee-degrees ezingama-360 emva kokudibanisa onke amacala aso, unxantathu usisiqingatha senani elinamacala amane, ngenxa yesi sizathu isixa seeengile zaso kufuneka sibe ziidigri eziyi-180.
Inani ngalinye lejiyometri elichongwe njengonxantathu liqulathe uthotho lwezinto ezichongiweyo zazahlula kwelinye inani. Imigca zizinto ezikhoyo ngaphakathi kuyo, ke makhe sibone ukuba ziyintoni na:
I-Median, ngumgca odlula embindini kanxantathu obizwa ngokuba liziko lomxhuzulane, ujoyine i-vertex nganye kwiziko lomzobo kwaye ulele kumgca ochaseneyo.
Ii-angles, ezimiselwe kukuthambekela komgca ngamnye kunxantathu, zinokuba ngqindilili, zilungile okanye zide.
IVertex, njengokuba ii-angles zenziwe ngumdibaniso wemigca, zenza amanqaku angaphandle kwaye zilungiselelwe ngokwamanqanaba ahlukeneyo, ubukhulu becala buthongo.
I-Barycenter, indawo esembindini kanxantathu ithathelwa ingqalelo xa yonke imigca eqala kwi-vertex kwaye ijoyine i-midpoint idityanisiwe.
I-bisector, ngumgca owahlula unxantathu kwiindawo ezimbini ezilinganayo, ukuyifumana inkqubo ethile ye-arithmetic kufuneka yenziwe, ayifani kubo bonke oonxantathu.
Mediatrix, ngumgca ojikelezayo oqala ukusuka kumanqaku asembindini wamacala omfanekiso, bakwabizwa ngokuba yi-circumcenter.
I-Orthocenter okanye ukuphakama, ngumgca othe nkqo olinganisa ubude bokwenene kanxantathu ngokwamacandelo afanayo aqala ukusuka kwi-vertex ukuya kwelinye icala, akufuneki adideke kunye nemigca ephakathi.
Njengomfanekiso wejiyometri, wenziwe ngezinto ezahlukeneyo kunye nezinto ezivumela ukuchaza iinkcukacha ezahlukeneyo kunye neempawu, phakathi kwezona zibalulekileyo sinazo.
Zonke zinendawo ezintathu.
Ngokunjalo, zinamacala amathathu kwaye ii-engile ezintathu azisekho
Isangqa seengile zayo ezilula siya kuvelisa iidigri ezili-180.
Ngokwenxalenye yayo, isixa samacala aso angaphandle sidibanisa ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-360
Konxantathu basekunene, iinkqubo ezibizwa ngokuba zii-trigonometric ziyenziwa apho amacala amafutshane abizwa ngokuba yimilenze kunye nelona lide njenge-hypotenuse.
Ukusekwa kwe-trigonometry kusekwe kumyinge we-quotient phakathi kwecala ngalinye.
I-sine yi-quotient yomlenze ejongene ne-hypotenuse.
I-cosine yeyomlenze ecaleni kwe-hypotenuse.
I-Tangent ibonisa i-quotient phakathi komlenze ochaseneyo kunye nomlenze osondeleyo.
I-cosecant kukulingana kwe-hypotenuse kwaye ifunyenwe kumlenze ochaseneyo.
Ngokukhuselekileyo, sisigqibo se-hypotenuse esifunyenwe phakathi komlenze okufutshane.
I-Cotangent: I-quotient ukhona phakathi komlenze osondeleyo kunye nomlenze ochaseneyo uqwalaselwa.
Ziyizincedisi zazo zonke iipoligoni eziqhelekileyo kunye neenkwenkwezi.
Sele siyazi cZingaphi iindidi zonxantathu ezikhoyoEzi zikhonze amawaka eminyaka: bakhonze ukwandisa ulwazi olunxulumene nejometri. Ubume bayo buvumela ukuba kuphuhliswe amanani aqinileyo kunye nolwakhiwo olunokuvelisa ukuhlala ixesha elide. Uyilo lokwandiswa koonxantathu luhambelana nendlela ekufuneka zenziwe ngayo iiphiramidi.
Namhlanje ukufundwa koonxantathu kuhambelana ngqo nemathematics, apho kule minyaka idlulileyo kufunyenwe izifundo apho ukusetyenziswa kwayo eluntwini. Ikwasebenza nasekufundweni kwe-trigonometry, evumela ukuba isetyenziswe kwiindawo ezinje ngoyilo, uyilo kunye nobunjineli.
Kwinqaku elilandelayo ungafunda malunga nezinto ezinxulumene nesi sihloko, ungaphoswa Uxande kunye nendawo yesikwere.